Kutheni ufanele ufumane isiqinisekiso seCISSP?
Ufuna ukufumana isatifikethi se-CISSP, kodwa ungaqinisekanga kakhulu ngempembelelo enokuba nayo emsebenzini wakho wobugcisa? Ewe! Ufika nje kwindawo efanelekileyo! Siza kukuxelela izizathu eziphambili zokuba kungani ufumana isatifikethi seCISSP.
Yintoni isatifikethi seCISSP?
Kutheni ufumana i-CISSP Certification?
Yiyiphi Umyinge wemvuzo weCISSP eqinisekisiwe?
I-CISSP isichazizwi seNgcaciso yeeNkcukacha zoKhuseleko lweeNkcukacha. I-CISSP iyisiqinisekiso sokukhusela se-IT esiye senziwe yi-Consortium ye-International Information Systems Security Cerorum (ISC2). I-ISC2 yinhlangano engekho inzuzo ejolise ekuchazeni imigangatho yezokuphepha kwe-IT emhlabeni wonke. I-ISC2 igcina iBhunga eliQhe leNgcaciso (CBK) ngokukhuseleko lwe-cyber kwaye linika ezinye izitifiketi zokukhusela ze-IT ezininzi zehlabathi.
CISSP i-certified level level eye yenzelwe abaqeqeshi be-cyber abaqeqeshiweyo abanobungcali obuqinisekisiweyo ekulawuleni ukhuseleko lwengcaciso yemo yoshishino. Ukufumana uqeqesho lwe-CISSP kwiziko elichaziweyo, njenge-ITS Tech School, eligunyazisiweyo ngu-ISC2, unikezela indawo enkulu yokufunda kunye nokwandisa amathuba omviwa wokucima ukuhlolwa kwe-CISSP.
Kukho iinzuzo ezingenakubalwa zokufumana Isiqinisekiso seCISSP. Apha siza kubhala izizathu eziphezulu ze-5 ukuze kuqinisekiswe i-CISSP:
Ukwandiswa kwemfuno yoLwazi lwezoKhuseleko: Ehlabathini lonke, iziganeko zokuphulwa kwezokhuseleko zolwazi zinyanzelise ukwanda kwenkcitho yombutho kwi-IT yokuphepha. Ulwabiwo-mali oluhlukeneyo lubelwe ngokukodwa ukhuseleko lwe-IT, oku kuthetha ukuba kuphakama ukuqeshwa kwabantu abaqeqeshiweyo.
Wide Career Scope: I-CISSP ingcali eqinisekisiweyo inokukwazi ukusingatha uluhlu oluthile lwezinto ezisongelayo kunye nokuhlaselwa kwe-cyber, okwenza umntu abe nolwazi olunzulu nolwazi. Ayikho inkunkuma yemisebenzi yoluchwepheshe onokukwazi ukulawula uluhlu lwayo yokhuseleko imo izakhono, ezibandakanya - i-Asset Security, i-Software Security, i-Network Security, ukuPhathwa kweNkcazo kunye nokuPhinda kweNtlekele phakathi kwamanye amaninzi.
Izaziso zongeza Ukwamkelwa kwezakhono:I-CISSP eqinisekisiweyo yemigaqo yokuqaphela nokuhlonipha izakhono zabo nolwazi olufunyenwe ngamava aluncedo nokufumana imeko eqinisekisiwe. Uvavanyo lwe-CISSP alukho lula ukuphazamisa; nangona kunjalo, xa sele ichitshiweyo kwaye isatifikethi siyifumaneka, iyaziwa njenge-Standard Gold ye-IT yokuphepha emhlabeni jikelele.
Umvuzo omyinge weCISSP oqinisekisiwe uchwepheshe, ngokwe-Global Information Security Workforce Study (2015), ngu-US $ 103,117.
Iintlawulo zokuthatha iCISSP kwiklasi eligunyazisiweyo njenge-ITS Tech School ligqithise ngakumbi iinkxalabo kunye nokukhathazeka onokuba nakho. Ukuba ufuna ukuthatha umsebenzi wakho ukhuseleko lwengcaciso kwizinga eliphezulu, iCISSP iya kuninika amaphiko!
Ezihlobene:Kutheni iikhampani zifuna abaPhuhli bezoKhuseleko kunye nee-Admins CEH eziqinisekisiweyo?